10-ka xiddig ee aadka u neceb Tababare Pep Guardiola…. (Miyuu ku jiraa Lionel Messi?) – Gool FM
(World) 21 Luulyo 2019. Pep Guardiola iminka waa layliyaha kooxda Man City ee ka ciyaarta Horyaalka Premier League waxa uu kubadda cagta ka yeelay mid casri ah kaddib markii uu raacay falsafaddii Johan Cruff ee tiki-taka isagoo milkiyay naanaysta filoosooskii casriga ee dhanka kubadda cagta.
Pep waxa uu soo maamulay xirfaddiisa kubadda acagta dhanka macallinimo qaar ka mid ah kooxaha ugu magiaca weyn kubadda cagta sida camaaliqada reer Spain ee Barcelona iyo naadiga Bayer Munich ee ka dhisan Jarmalka walow uu hadda maamulo kooxda Sky Blue ee difacanaysa horyaalka heerka koowaad ee England.
Ninka reer Spain ayaa soo hoggaamiyay qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta Caalamka sida Messi , Ronaldinho. Zlatan Ibrahimovic , Bastian Schweinsteiger, Xabi Alonso, Robert Lewandowski, Sergio Aguero, Samuel Eto iyo xiddigo Kale oo aan halkaan lagu soo koobi karin.
Haddaba wax ka ogow 10-ka xiddig ee aadka u neceb macallinka reer spain ee Pep Guardiola kana daawo Muuqaalka hoose.